सिपाही सँग भागेकी हवलदारकी श्रीमती सम्पर्कमा आइन त ? उदयपुर बाट अन्तिम (हेर्नुस् भिडियो) – Daily NpNews
मुख्य पृष्ठ /भिडियो/सिपाही सँग भागेकी हवलदारकी श्रीमती सम्पर्कमा आइन त ? उदयपुर बाट अन्तिम (हेर्नुस् भिडियो)
उदयपुर । एउटी आमाकोलागी उस्को सन्तान नै यो संसारमा सबैथोक हुन्छ । सन्तानप्रतिको मोहलाई यो संसारको कुनै कुरासंग साँट्न मिल्दैन । तर उदयपुरमा एउटी आमाले आफ्नै सन्तानको मायालाई एउटा एउटा चाउचाउ, बिस्किट र हजारको नोटसंग साँटेकि छन् । उनले आफ्ना कलिला छोराछोरीको हातमा यी खाने कुरा थमाएर आफु भने अर्कैको श्रीमानसंग भागेकी छन् ।**भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **